केपी ओली चै तासको खाल चलाउँदैछन् र ? : खगेन्द्र संग्रौला – SaipalNews.com
माघ १९, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना कुरा सल्लाहकारमार्फत भन्न लगाउने गरेको आरोप लेखक खगेन्द्र संग्रौलाले लगाएका छन्। समाजिक सञ्चाल ट्वीटरमार्फत उनले सो आरोप लगाएका हुन्।
नेकपा केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले पार्टीमा गुटबन्दी गरिरहेको आरोप अध्यक्ष प्रचण्डमाथि लगाएका थिए। सोही विषयमाथि कटाक्ष गर्दै लेखक संग्रौलाले प्रधानमन्त्री ओलीचाहिँ के चलाउँदै होलान् ? जुवाको खाल ? भन्दै प्रश्न गरेका छन्।
उनले समाजिक संजालमा लेखेका छन्, ‘ओली सर साह्रै बाठा । आफूलाई भन्न मन लागेको कुरो आज्ञाकारी सल्लाहकार सूर्य थापाका मुखबाट प्वाक्क भनाउँछन् । भर्खरै भनाएछन्, ‘प्रचण्डले पार्टी होइन, गुट चलाए।’ कुरा सही हो। अनि ओली सर आफूचाहिँ के चलाउँदै होलान् ? जुवाको खाल ?’
केन्द्रीय समिति बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि सुझाव पेश गर्दै सूर्य थापाले भनेका थिए, ‘पार्टीमा गुटबन्दी फस्टाएको, अनुशासनहीनता, अराजकता प्रदर्शन र स्वार्थ प्रेरित बैठकहरु किन भएका छन् ? भैँसेपाटी, खुमलटार वा अन्यत्र यस्ता बैठक किन भइरहेका छन् ? मूल नेतृत्वलाई घेराबन्दी र असफल पार्ने गरी अनुचित क्रियाकलापहरू गरिनु हुँदैन।’
यसअघि नेकपा स्थायी समिति सदस्य भीम रावलले पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सल्लाहकारमार्फत आफूविरुद्ध अभिव्यक्ति दिन लगाएको आरोप लगाएका थिए।
कोरोना संक्रमितको उपचारमा सांसदकै पुग्दैन पहुँच